BRIKAVILLE SY TOAMASINA : Antokin’ny fampandrosoana ny fiaraha-miasan’ ny kaominina roa tonta
Afaka mampiroborobo ny fampandrosoana hatrany isika Malagasy na dia tsy misy fanampiana avy any ivelany aza. Azo atao tsara ny mametraka fiaraha-miasa matotra eo amin’ ny Kaominina roa na maromaro. 10 août 2017
Isan’ ny nanantanteraka izany ny Kaominina Brickaville sy ny Kaominina Toamasina. Tafiditra ao anatin’ ilay antsoina hoe “ jumellage ” izany mba hifanampiana eo amin’ ny sehatra rehetra, indrindra ny fampandrosoana ny toe-karena. Betsaka ireo vokatra misy ao amin’ny Distrikan’i Brickaville,toy ny jono , fambolena.
Ankoatran’ny fanapariahana eo amin’ny tsena anatiny eto Madagasikara mantsy dia manondrana ny vokatra mankany ivelany ihany koa ity tanàna ity. Tombontsoa maro araka izany no azon’ ny distrikan’i Brickaville izay tarihan’ny Kaominina Renivohitrry ny distrika amin’ny fanamafisana ny fiaraha-miasa amin’ny Kaominina Toamasina. Havaozina araka izany ny tranom-pokonolona ao an-toerana mba ahafahan’ny Kaominina mampidi-bola.
Fa isan’ny tetikasa izay haroso maika eo amin’ny fiaraha-miasan’ ny roa tonta hoy ny Ben’ny tanànan’ i Toamasina , Elysée Ratsiraka “ ny fananganana rafitra manokana hisehatra eo amin’ny “ litchis”, na izany ho an’ny tsena anatiny na ny fanondranana mankany ivelany ”. Tsy vitan’izany ihany fa na amin’ny lafiny ara-panatanjahan-tena aza dia hohamafisina daholo.
Samy entina mampiroborobo ny fizahantany avokoa izany rehetra izany raha ny fanazavàna. Anisany nanamarihana ny fiaraha-miasan’ny roa tonta koa ny fikarakarana fihaonana ara-panatanjahan-tena, lalao baolika kitra teo amin’ny ekipan’ny Voromaherin’ i Brickaville sy ny Appel Mahanoro tao amin’ny kianjan’i Maromamy. Samy nahazo amboara sy fanomezana avy amin’ny Ben’ny tanànan’i Toamasina sady filoha mpanorina ny antoko Appel avokoa ny ekipa roa tonta na dia nivoaka ho mpandresy tany amin’ny fandakàna “tire au but” aza ny ekipan’i brickaville.